Ụbọchị My Pet » Nkwanye Ùgwù
emelitere ikpeazụ: Ka. 26 2020 | < 1
E nwere ọnyà na ọtụtụ n'ime anyị n'ihi na n'ihi na ọtụtụ akụkụ ụmụ agbọghọ na-nwe mmeko na-atọ ụtọ, nnabata, n'ezinụlọ, ọma mannered wdg. Mgbe anyị na-eto na-esi n'ime mmekọrịta, ọtụtụ n'ime anyị adịghị maara n'ezie ihe na-eme omume enweghị nkwanye ùgwù.
Ọ bụ obere ka anyị na-oyi kpọnwụrụ. Akpata oyi wụrụ. Edikpu. Ugbu a, ihe? Ọfọn, e nwere a pasent nke ndị inyom bụ ndị na-agaghị anabata na ụdị ọ bụla nke nkwanye ùgwù ha mmekọrịta. Otu merenụ ma ha eri. Eleghị anya a ezi echiche!
Ma mgbe ahụ, e nwere ndị ọzọ nke anyị – onye ma nweta nwa oge ma ọ bụ na-ewe iwe iwe, ma dị ka a ilu Erere – anyị ilo ya na-aga. Nke a abụghị ezi echiche.
N'agbanyeghị otú ọtụtụ mmekọ i nwere ike izute n'oge ndụ gị, e mgbe niile kwesịrị ịbụ dịkarịa ala otu chọrọ – na ị na-emeso ya ùgwù site n'ụbọchị ruo mgbe ọgwụgwụ.
Lee maka ebe nke nkwanye ùgwù mgbe…
1. Ị na-akpachi anya. Ọ kwesịrị ịkwanyere-amasị gị na-adịghị amasị.
2. Ị na-agwa okwu ọ bụla ọzọ. O kwesịrị ikwu okwu gị ka onye na-ewe iwe ma ọ bụ papa gị na-amasị na na onye iberibe.
3. Ị na-arụ ụka. Ọbụna okpomọkụ nke agha, ị na-ekwesịghị lelịa. Ọ bụrụ na ọ na-akawanye na kpụ ọkụ n'ọnụ – onye kwesịrị ije ije na pụọ.
4. Ọ bụ na gburugburu enyi gị na ndị ezinụlọ. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị na-emeso ndị enyi gị / ezinụlọ na-akwanyere, mgbe ahụ, ọ na-adịghị akwanyere gị ùgwù. Ha na-ndọtị nke ị.
5. Ị na-igbu onwe ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmekọrịta dị n'elu na e nwere ndị na-ewute obi – o kwesịrị na-ezuru nkwanye ùgwù maka ihe ị òkè na-akwụsị ya ma ọ bụ na-anabata ọgwụgwụ na klas.
Nwere ike Anu ulo Sense Red ọkọlọtọ Mgbe ọ na-abịakwute Mr. Right?